नेपाली बजारमा ग्यालेक्सी एस २०, ग्यालेक्सी एस २० प्लस र ग्यालेक्सी एस २० अल्ट्राको मूल्य कति?
नेपाली पब्लिक शनिबार, वैशाख १३, २०७७
एजेन्सी– गत फेब्रुवारीकाे दाेस्राे हप्तामा सामसङले आफ्नो बहुप्रतिक्षित ग्यालेक्सी एस सिरिजमा ‘एस ट्वान्टी’ संकरणका स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक गरेको थियाे। कम्पनीले अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को सहरमा आयोजित ‘ग्यालेक्सी अनप्याक्ड इभेन्ट’ मा ग्यालेक्सी एस २०, ग्यालेक्सी एस २० प्लस र एस २० अल्ट्रा गरि तिन वटा स्मार्टफोनहरु लन्च गरेको हो।
नेपालमा पनि ‘एस ट्वान्टी’ संकरणका यी नयाँ स्मार्टफोनहरु उपलब्ध रहेकाे छ। सामसङ नेपालले गत मार्च महिनामा यी स्मार्टफोनहरू अाधिकारिक रूपमा नेपाली बजारमा लन्च गरेकाे थियाे।
कम्पनीको अनुसार यी स्मार्टफोनमध्ये ग्यालेक्सी एस २० अल्ट्रा नयाँ एडिशन हो भने ग्यालेक्सी एस२० ग्यालेक्सी एस १० प्लसको अपग्रेड भर्जन हाे। त्यस्तै ग्यालेक्सी एस २० प्लस भने सिधा रुपमा ग्यालेक्सी एस २० को अपग्रेड भर्जन हो। यी तीन ओटै स्मार्टफोनमा १२० एचजेड डिस्प्ले, ५जी सपाेर्टिभ, ८ के भिडियो रेर्क्डिङ्ग सर्पोडसँगै इम्प्रुभ्ड क्यामरा, ठुलो ब्याट्री र नयाँ डिजाइन जस्ता फिचरहरू दिइएको छ।
१. सामसङ ग्यालेक्सी एस २०
सामसङ ग्यालेक्सी एस २० यो सिरिजका अरु स्मार्टफोनहरु भन्दा सस्तो स्मार्टफोन हो। जसमा ६.२ इञ्चको क्वाड एचडी डाइनामिक एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। याे ८ र १२ जीर्बी याम अप्सनमा उपलब्ध रहेको छ भने यसमा १२३ जीबी इन्टरनल मेमोरी रहेको छ र यो फोनले एक टिबीसम्मको एसडीकार्ड सपोर्ट गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।
ग्यालेक्सी एस२० मा ट्रिपल रियर क्यामरा राखिएको छ। जसमा ६४ मेगापिक्सेलको प्राइमरी सेन्सरसहित १२ मेगापिक्सलको वाइड एंगल लेन्स र १२ मेगापिक्सलको अल्ट्रा–वाइड एंगल लेन्स सेटअप रहेको छ भने सेल्फीका लागि १० मेगापिक्सलको क्यामरा दिइएको छ। २५ वाटको फास्ट चार्जिङ सिस्टम सहित यसमा ४००० एमएएच क्षमताकोको ब्याट्रि रहेको छ।
कम्पनीले यसको सुरुवाती मूल्य ९ सय ९९ डलर ताेकेकाे थियाे। नेपाली बजारमा भने यो फोनको मूल्य १ लाख ७ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ रहेकाे छ।
२. ग्लोक्सी एस२० प्लस
ग्लोक्सी एस२० प्लसको विशेषताहरु धेरै हदसम्म ग्यालेक्सी एस२० सँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। तरपनी यो स्मार्टफोनमा ब्याट्री, यसको साइज र क्यामरामा केहि फरक रहेको छ। ग्लोक्सी एस२० प्लसमा ८ जीबी र्याम तथा १ सय २८ जीबी रोम र १२ जीबी र्याम तथा ५ सय १२ जीबी रोम अप्सनमा उपलब्ध रहेको छ। साथै यो स्मार्टफोनमा एक टिबीसम्मको माक्रो एसडी कार्ड सर्पोट गर्छ।
६.७ इञ्चको क्वाड एचडीप्लस डाइनामिक एमोलेड डिस्प्ले रहेको यो स्मार्टफोनमा एचडीआर १० पल्स सर्टिफाइड रहेको छ। ग्लोक्सी एस२० प्लसमा ६४ मेगापिक्सेलको प्राइमरी क्यामरा रहेको छ भने १२ मेगापिक्सेलका दुई क्यामरासहित एउटा डेप्थ सेन्सर दिइएको छ र सेल्फीका लागि १० मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ। २५ वाटको फास्ट चार्जिङ सिस्टम रहेको यो फोनमा ४५०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री राखिएको छ।
नेपाली बजारमा यो फोनको मूल्य १ लाख १९ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ रहेकाे छ।
३. ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा
ग्यालेक्सी एस२० अल्ट्रा यो सिरिजको सबैभन्दा प्रिमियम स्मार्टफोन मानिएको छ। जसमा ६.९ इञ्चको क्वाड एचडी डाइनामिक एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ। साथै यो स्मार्टफोनमा सय गुणा डिजिटल जूमसहितको १ सय ८ मेगापिक्सेलको मूख्य क्यामरा रहेको छ।
कम्पनीकाे अनुसार १ सय २० हर्ज रिफ्रेश रेट रहेको एस२० अल्ट्रामा एचडीआर १० प्लस सर्टिफाइड रहेको छ। यो फोन १२ जीबी र १६ जीर्बी याम गरि दुई अप्सनमा आएको छ। त्यस्तै १२८, २५६ र ५१२ जीबी स्टोरेज भेरियन्टमा रहेको यो स्मार्टफोनको मेमोरीलाई माइक्रो एसडी कार्डमार्फत एक टीबीसम्म बढाउन सकिन्छ।
१ सय ८ मेगापिक्सेलको प्राइमरी सेन्सरका साथ ४८ मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स, १२ मेगापिक्सेलको अल्ट्रा–वाइड एंगल लेन्स र डेप्थ सेन्सर सहितको क्यामरा रहेको फोनमा सेल्फीका लागि ४० मेगापिक्सलको क्यामरा रहेको छ। ४५ वाटको फास्ट चार्जिङ सिस्टम रहेको यो फोनमा ५००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री राखिएको छ।
कम्पनीले यसको सुरुवाती मूल्य ९ सय ९९ डलर ताेकेकाे थियाे। नेपाली बजारमा भने यो फोनको मूल्य १ लाख ६० हजार रहेकाे छ।
#स्मार्टफोन #ग्यालेक्सी एस २० #ग्यालेक्सी एस २० प्लस #एस २० अल्ट्रा
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख १३, २०७७ १८:१६